Photo Software | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label Photo Software. Show all posts
ဓါတ်ပုံတွေကို Software အကြီးတွေ အသုံးပြု စရာမလိုပဲ ဒီ tool လေးနဲ့တင် အမြန်ဆုံးနဲ့ အထိ ရောက်ဆုံး ပြုပြင်နိုင်မယ့် Tools လေး တစ်ခုပါ။
အရှေ့မှာ တင်ထားတဲ့ keys လေးတွေ အလုပ် မလုပ်တော့လို့ ကျွန်တော် နောက်ထပ် ထပ်ရှာပြီး တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
Full Version ရအောင် အထဲမှာ Patch ဖိုင်လေးပါ ထည့်ပေး ထားပါတယ်။ ဒီ Software ကို Run တဲ့ အချိန်မှာတော့ Internet ကို ပိတ်ထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
တစ်ကယ်လို့ ထည့်ရတာ Error ဖြစ်နေမယ် ဆိုရင် ပြန်ပြီး Uninstall လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Registry keys ထဲမှာ ဝင်ပြီး Delete လုပ်ပေးပြီး ပြန် Install လုပ်ရင် အဆင်ပြေမှာပါ။
Original link - http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/GWRdS/~3/Ua_i54AgTpc/photoinstrument-73-build-750_13.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
ကဏ္ဍ PC-Software, Photo Software
ကာတွန်း ချစ်သူများ အတွက် ဖုန်းမှာ ကိုယ့် ဓါတ်ပုံ တွေကို ကာတွန်း ပုံများ ဖန်တီး နိုင်သော ဆော့ဝဲ လေး ကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
မိမိရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ (သို့မဟုတ်) ရင်နှီး ချစ်ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်း ပုံတွေကို ကာတွန်းပုံ ပြောင်းပြီး မိမိဖုန်းထဲမှာ Content ဓါတ်ပုံတွေ အဖြစ်လည်း အသုံး ပြုနိုင် ပါသေးတယ်။
မိုဘိုင်းဖုန်း သုံးသူ အတော် များများလည်း သိကြ မှာပါ အပျင်းလည်း ပြေပါတယ်။
-Brand new cartoon materials
Updated : March 13, 2015
Current Version : 1.6.41_20150313
▼ play.google.com ▼ OR ▼ 1mobile.com ▼ OR ▼ googledrive.com ▼
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, Photo Software
Photo Edit လုပ်တဲ့ application တွေ အများကြီး ရှိတဲ့ အနက်မှ အကောင်း တကာ့ အကောင်းဆုံး တွေကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်မှု ရှိတက်တဲ့ ကျွန်တော့် ဆိုဒ်ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ အတွက် HDR FX Photo Editor ဆိုတဲ့ Application ကောင်းလေး တစ်ခုကို ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်။
Effect တွေ စုံလင်လှတဲ့ အပြင် ကောင်းမွန် စိုပြေလှတဲ့ Color တွေကို လည်း အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံး application ကိုမှ အသုံးပြု ချင်ရင်တော့အောက်မှာ Download ရယူလိုက်ပါ
Photo Grid ကိုသုံးပြီး ဓာတ်ပုံတွေကို တည်းဖြတ်မယ်
မိမိ ဖုန်းမှာ ပုံလေး တွေကို လှလှလေး လုပ်ဖို့ တစ်ပုံနှင့် တစ်ပုံ ပေါင်းပြီး စတိုင် လန်းလန်းလေး တွေ လုပ်မယ် ဆိုရင် ... Photo grid က သင့် အတွက် အကောင်းဆုံး ပါပဲ..... ဒီ အထဲမှာ .. မိမိလိုရာ template တွေကို ရွေးနိုင် သလို... မိမိရဲ့ ဓာတ်ပုံ တွေကို Video လည်း လုပ်လို့ရ ပါတယ်ဗျာ...
အသုံးပြုချင်ရင်တော့ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
Mojosoft Photo Calendar Studio 2015 1.20 portable
မိမိ စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ပြက္ခဒိန် လှလှလေးတွေ လုပ်ပြီး မိမိအခန်း / ရုံးခန်း / အိမ်မှာ ချိတ်ဆွဲ ထားချင် သူများ အတွက် Mojosoft Photo Calendar Studio ဆော့ဝဲလေး တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
Portable လေးဖြစ်တာကြောင့် ကွန်ပြူတာမှာ အင်စတော လုပ်ဘို့ မလိုဘဲ အသင့် သုံးနိုင် ပါတယ်။
အသုံးပြုလိုသူများ အောက်ဆုံးမှာ ပေးထားတဲ့ လင့်ကနေ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
ကဏ္ဍ Photo Software, ပြက္ခဒိန်
LensFlare ipa For IOS
Photo Shop ဝါသနာ ပါတဲ့ သူတွေ အတွက် တခြား application မှာ မပါ aသးတဲ့ effect တွေနဲ့
LensFlare ipa လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
တကယ်ပါ တော်တော်လေးကို လန်းပါတယ် Apple Store မှာတော့ $ 2.85 ပေးဝယ် ရမှာပါ။
ဒီဆိုဒ်လေးမှာတော့ အခမဲ့ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ လင့်တွေကနေ ဒေါင်းယူပါ။
ကဏ္ဍ iDevice, iOS, iPhone, Phone Application, Photo Software
Picture Cutout Guide 3.2.8 portable
▼ userscloud.com ▼ OR ▼ turbobit.net ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, February 20, 2015 No comments:
MomentCam version 2.7.0 အသစ်လေးကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
MomentCam ဆိုတာ ကတော့ အသင့်ပြုလုပ် ပြီးသား ကာတွန်း ပုံလေးတွေမှာ မိမိတို့ရဲ့ မျက်နှာ
ပုံလေးတွေကို အစားထိုးပေး လိုက်ရုံနဲ့ ပုံထဲမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ခဲခြစ် ကာတွန်းပုံလေးတွေ ရ
အဲ့လို အစားထိုးတဲ့ အခါမှာလည်း ယောကျာင်္းလေး ဆိုရင် ယောကျာင်္လေး အလျောက် မိန်းကလေး
ဆိုရင် မိန်းကလေး အလျောက် မိမိတို့နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပုံတွေကို ရွေးချယ် အစားထိုးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထဲမှာ အသင့် ပြုလုပ် ပြီးသား ကာတွန်း ပုံတွေ အများကြီး ရှိသလို အင်တာနက် ကနေလည်း
download ပြုလုပ်ပြီး ထပ်ယူနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါ့အပြင် မိမိ ပြုလုပ်နေတဲ့ ပုံတွေရဲ့ color ကိုလည်း စိတ်ကြိုက်ပြောင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိတို့ ပြုလုပ်ပြီးသား ပုံတွေကို Facebook, Twitter, WeChat, Instagram အစရှိတဲ့ social net
works တွေပေါ် ကိုလည်း တန်းပြီး share နိုင်မှာပါ။
ဒီ application ရဲ့ file size က 36.7MB ရှိပြီး android version 4.0 ကစပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
The cartoon version of you and your friends is awaiting - if you like cosplay and other manga or anime-related content then you'll love MomentCam. Withadaily update to the catalog of caricatures, the fun never ends!
UpdatedFebruary : 16,2015
Size : 36.69MB
Requires AndroidAndroid : 4.0 or higher
ဓါတ်ပုံတွေကို အလန်းစား ဖန်တီးပေးမဲ့ Paper Artist v2.0.14 apk
ပန်းချီ ပန်ပု ဓာတ်ပုံ အနုပညာကို ဝါသာနာ ပါတဲ့ ဘော်ဒါတွေ Artist ဆိုတဲ့ ခပ်မိုက်မိုက် apk လေး
တစ်ခု တင်ပေး လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ပန်းချီ ဆွဲပြီး ဓါတ်ပုံတွေကို ခပ်မိုက်မိုက် အလန်းစား ဖန်တီးချင်
သူများအတွက် Paper Artist ဆိုတဲ့ Application မိတ်ဆက်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ဒီ App လေး အခြား ဟာတွေ ထက် ပိုမိုက်တဲ့ Feature လေး တစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဘာလည်း ဆိုတော့
မိမိရဲ့ ပုံကို ဓါတ်ပုံ အတိုင်းထားပြီး Background ကိုဘဲ ခဲခြစ် ပန်းချီ ပုံစံမျိုး ဖန်တီးနိုင်ပါ တယ်။
သူ့မှာ ပါဝင်တဲ့ Function တွေ ကတော့ အများကြီးဘဲဗျာ။ Paper Artist ဆိုတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ ပုံတွေ
ကို စက္ကူလေး တစ်ရွက်ပေါ်မှာ ပန်းချီဆွဲ ထားသလိုလေး တစ်မျိုး ဆန်းနေအောင် ပြုပြင်နိုင်လို့ပါ။
နမူနာကြည့် နိုင်အောင် အောက်မှာ Screen Shot တွေကို ပြပေးထား ပါတယ်ဗျာ။
ဖိုင်ဆိုဒ်က10MB ရှိပြီးAndroid OS 4.0 နှင့် အထက်ဖုန်း များမှာ အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်ဗျာ။
ဓါတ်ပုံကို ရေ အရိပ်လေး တွေနဲ့ လုပ်တဲ့ water reflection
ဒီတခါ တင်ပေးမယ့် software လေးက photo editor ဖြစ်တဲ့ water reflection software လေးပဲဖြစ်
မိမိ ဓာတ်ပုံလေး တွေကို computer က photoshop နဲ့ လုပ်သလိုမျိုး ကိုယ့်ရဲ့ ပုံကို ရေထဲမှာ အရိပ်
ပေါ်နေ သလိုမျိုး လေးတွေနဲ့ effect လုပ်လို့ ရတဲ့ apk လေးပါ။
သူက ပုံတွေကို ပြင်ပြီးတော့ frame တွေကော text တွေကော colour တွေကော အများကြီး ပြောင်း